I-Boathouse ikwiZibuko laseGilkey eneembono zasentshona phezu kweenduli zeCamden kunye nokutshona kwelanga okumangalisayo. Ukusetyenziswa ngokupheleleyo kwedokhi ngqo phambi kwendlu yesikhephe. Ukufikelela ngokupheleleyo kumda waselwandle kunye neehektare ezininzi zokuphonononga! I-LGBT inobubele.
I-Boathouse ifana nento owakhe wayibona. Indlu yesikhephe eneminyaka eyi-120 yajika yaba yindawo epholileyo, efudumeleyo kunye ne-vista egcweleyo ongasokuze ufune ukuyishiya! Sinendawo yokukhwela isikhephe ukuba unqwenela ukungena ngesikhephe, siyakucela ukuba uze neyakho idingy kunye nezinye izinto zokuhamba ukuze ujikeleze isiqithi.
Le ndawo ikwisiqithi sase-Islesboro. Ukufikelela kunokufezekiswa ngesikhephe ukusuka kwisikhululo seSikhephe saseLincoinville. Sicebisa ukuba ubhukishe indawo ukuze uqinisekise ukuba ufikile esiqithini. Kwiinyanga zasehlotyeni, kunokuba nzima ngakumbi ukukhwela isikhephe ngexesha elifanelekileyo!
Umnakekeli wethu uyafumaneka 24-7 ukunyamekela naziphi na iimfuno ezinokuvela!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Islesboro